Email Chinyorwa Rental, Izvo Zvaunofanira Kuziva
Chitatu, Kurume 24, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Scott Hardigree
Kazhinji zvinomhurwa uye kazhinji kusanzwisiswa, tsamba yeemail yekurenda chiitiko chinogamuchirwa nevazhinji chekushambadzira icho chinogona kupa yakasimba ROI, kana iwe uchiziva zvekutarisa nekuremekedza iyo inbox. Kana iwe usina kujaira kana kusafadzwa nekurendesa email rondedzero heino kuderera pane zvakanakira pamwe nezvayo zvakakosha kusiyanisa zvinhu uye kufunga.
Zvinosuruvarisa zviri pamutemo email rondedzero yekuhaya mikana yakashatiswa nemaitiro evashoma-pane-stellar vanopa vangave ivo vanonyora macompiler, email kero vatengesi, kana vane mhanza-vakatarisana nevanyepi. Hapana chimwe chazvo chingangobatsira mutengesi ROI. Nei uchifanira kudaro? Vagashiri veemail havana hukama nesangano rine yavo email kero, uye vanotumira chako kupihwa.
Mumakore angu gumi nemaviri mukushambadzira kweemail ini ndakaona kuti mikana yakanakisa kazhinji iri mukurenda zvechokwadi zvinyorwa zvekunyorera. Ndokunge, mazita eemail akanyorwa ayo anotorwa kubva muzvinyorwa, masevhisi, kana zvigadzirwa izvo mugashiri anoziva, uye kukosha.
Mashandiro Ainoita & Mazano Akakosha
Varidzi vezvinyorwa vanozotumira kupihwa kwemushambadzi kune vanyori vavo.
Mushambadzi anobhadhara mubhadharo webasa iri, kazhinji pamutengo-chiuru (CPM) hwaro.
Kusiyana neiyo yakananga tsamba kana telemarketing, mushambadzi haamboone iyo rondedzero.
Kusiyana nekushambadzira kuri mukati, izvi zvese ndezve kuburitsa yakakosha kupa, kwete zvemukati.
Rondedzero kusarudzwa ndicho chinhu chakanyanya kukosha, kuchiteverwa nechipo uye neyakagadzira.
Kune vazhinji vatengesi eemail rondedzero yekurenda inzira inowirirana yekukura kwavo vega zvinyorwa, kurongedza mapaipi avo uyezve, vachiita kutengesa zvakananga Heano mamwe mabhenefiti.
Kukosha kweSangano (pamwe nemuridzi wenyaya)
Yakaderera Mutengo wekuwana (enzanisa kune mamwe akananga makwara)
Iyo Inokurumidza (bvunzo mhedzisiro uye gadzirisa mumazuva, kwete mavhiki)
Kununurwa kuri Nani (Kuenzaniswa kune akateedzerwa uye ezvinyorwa zvekutenga)
Rondedzero varidzi vanouya mune akawanda manakiro senge vatengesi, vagadziri vezviitiko, masangano, vaparidzi vechinyakare, uye mabloggi. Zvese izvo zvinogona kuwana kukosha kwakanyanya muemail rondedzero yekurenda futi, kunyangwe iri rakasiyana mhando.
Mari ($ 1-2 pamunhu anonyorera, pagore mutemo wakanaka wechigunwe)
Kudzora (chii, riini, ndiani)
Nyore (hapana kutengesa, kushambadzira, kubhadharisa - kana iwe uchishanda ne Nyanzvi Runyorwa Management Kambani).
Hutsanana (weed kunze yakaoma bounces kakawanda)
Kuenderera mberi nekusarudza rondedzero chaiyo, vashambadzi vakangwara havachisiri kutora iyo tenga zvinhu zvangu nzira. Panzvimbo pezvo nyora mishandirapamwe yekuhaya iri kuwedzera kugadzira, tarisa pamushandirapamwe uyu kubva kuSurfline uye Rip Curl. Uyu muenzaniso wakanaka wekuti vaparidzi vanokwanisa sei kunyorera avo vanonyorera nekunanga kuwana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, masevhisi, kana zvinopihwa, uye kukunda moyo yavo mukuita.
Remangwana reEndaneti Rental
Kutumirwa neemail idambudziko riri kuenderera mberi kune vashambadziri vezita vanoshandisa zvakateerana kana zvakatengwa zvinyorwa. Saizvozvo, dambudziko ingangove yakareruka kutsanangudza. Uye icho chinhu chakanaka. Inosunungura mabhokisi etsamba evashambadzi ayo anoda kunongedzera zvavanopa kune vanyoresa zviri pamutemo avo vakaratidza kufarira uye vanogona kunge vachida panguva yakakodzera, kana kuwana kukosha chaiko mumukana.
Tags: email listtsamba yeemail yekurendaPamazitanyora rendi
Misangano - Kufa kweAmerican Kugadzira
Unoita Huru Muteveri Manhamba Anonyatsoverenga?
Mar 25, 2010 pa 10: 46 AM
Thanks Scott nekuda kweruzivo rwakakosha kudaro pakushambadzira email. Ndakaona nyaya iyi ichinakidza kune avo vachangotanga makambani ane chigadzirwa chikuru asi asiri rondedzero yevatengi vakasarudza kuvemo.
Ini ndinofunga inogona kupa iro bhizinesi mabhenefiti akawanda, imwe yacho, ichibatanidzwa neiyo rondedzero muridzi bhizinesi. Saka ita shuwa kuti bhizinesi rine mukurumbira wakanaka pakati pevatengi vavo nekuti zvikasadaro izvo zvinongouraya brand yako pachinzvimbo chekusimudzira.
Joinha nhaurirano nezve email kushambadzira paStartups.com Q&A
Apr 25, 2016 pa 2: 56 PM
Zita reEmail Rental Agency rinonzi chii. Ndine runyorwa rwevanopfuura 1mill + vanyoreri uye ndinoda kurenda runyorwa rwangu kana kuitengesa. Pane munhu angakurudzira kambani inoita izvozvo?